ISpain ingahle iphele emaphaketheni eqhwa ngenxa yokushisa komhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-La Maladeta Glacier (Pyrenees)
Njengoba iplanethi ifudumala izintaba zaseSpain ziyaphela iqhwa. Izifunda lapho ukuphakama kuphakeme khona futhi nemisebenzi yabantu iyindlala, zibe ngomunye wofakazi abakhulu bokufudumala komhlaba ezweni lethu.
Ekhulwini leminyaka elidlule cishe i-90% yokwelulwa isinyamalale, futhi lokhu kuhoxa kweqhwa bekuqhubeka ngesivinini kusukela ngo-1980. Uma isimo siqhubeka ngokufana, eminyakeni engama-40 bekungeke kusabakhona inguzunga yeqhwa.
Imiphumela yokushisa komhlaba iyabonakala ezintabeni eziphakeme zezwe. Inguzunga yeqhwa iLa Maladeta, esePyrenees, ilahlekelwe imitha ngobukhulu kuleli khulu leminyaka elidlule. Ngalesi sikhathi, isuke endaweni yokuhlala engamahektha angama-50 yaya ku-23,3. Ubukhulu beqhwa lilahlekelwe ngamamitha ayisishiyagalombili kwezinye izindawo. I-glacier kuphela ehlala ngaphezu kwamamitha ayi-3000 wobude.
Kodwa kungani? Kungani iqhwa liyancipha enyakatho yeSpain. Ngokwesifundo esenziwe yi ICantabria Meteorology Group (UC), yenza kancane ngama-60% ebusika -izinsuku eziyisishiyagalombili- futhi ngama-50% ngaphansi entwasahlobo -cishe kube kane- kunasekuqaleni kwekhulu leminyaka. Ngakho-ke, uma phakathi kwamalitha wezigidi ezinhlanu kuya kweziyisishiyagalombili zeqhwa liwile kuma-60s naku-70s, eminyakeni eyishumi lincishisiwe laba ngu-2,65.
Futhi, izinga lokushisa elijwayelekile selisukile ku-5 degrees Celsius laya ngaphezu kwe-8. Kube nokuncipha kwemvula, okufika kuma-25%, kwehla kusuka kumalitha ayi-16 billion kuya ku-12, ngakho-ke kube nokuncipha okufika kuma-50% weqhwa eliqongelelwe ngokokuhlola ukuthi I-Ebro Hydrographic Confederation (CHE) kwenziwa phakathi kuka-1984 no-2014 kuze kube yi- Uhlelo lwe-Erhin.
Ngaleli zinga, ngonyaka ka-2060 kungenzeka zingabi khona izinguzunga zeqhwa eSpain.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » ISpain ingaphelelwa ukungabaza kweqhwa ngenxa yokushisa komhlaba